राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरा केही दिनयता गृहजिल्ला रूपन्देहीमा सक्रिय छन् ।
पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपाको भूमिका कमजोर भए पनि बोहरा राष्ट्रिय राजनीतिका पुराना खेलाडी मध्येका एक हुन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निर्क्यौल भइसकेको छैन ।
यसै सन्दर्भमा राप्रपा वरिष्ठ नेता बोहरासँग लोकान्तरका लागि प्रकाश आचार्यले कुराकानी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसला गरेपछि देश कता जाँदैछ ?
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध गरेको फैसलालाई हामीले हार्दिकताका साथ स्वागत गरेका छौं । तर, फैसलापछि पनि देश अन्योलमै फस्ने देखिन्छ ।
संसद् पुनःस्थापनापछि पनि रिजल्ट निस्केला जस्तो लाग्दैन । नेकपा फूटले आधिकारिक मान्यता पाएको छैन । निर्वाचन आयोगले पनि त्यसमा निर्णय लिन सकेको छैन ।
कांग्रेस र राजपाले पनि कुन नेकपालाई मान्ने भनेर आधिकारिक निर्णय मागेका छन् । यसले गर्दा देशमा झनै अन्यौल सिर्जना हुँदै जाने मैले देखेको छु ।
तपाईंहरूले त प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचनलाई स्वागत गरेको होइन र ? फेरि संसद् पुनःस्थापनालाई पनि स्वागत गर्नुभयो ?
प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा हामीले असंवैधानिक कदम भनेका हौं । देश अन्योलमा रहनुभन्दा निर्वाचन नै मुलुकको निकास भन्ने हाम्रो आसय हो ।
अन्यौलमै देश लामो समय रहनुभन्दा त ताजा जनादेशबाटै निकास निस्कन्छ भन्ने कुरा त जगजायर नै छ नि ! प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चाल्नुभएको हो ।
असंवैधानिक बाटो हिँडनुभएकै हो । दुवै विकल्पलाई राखेर हामी ताजा जनादेशमा जान हुन्छ भनेका हौं । कुरा यही हो ।
भनेपछि देशले अब निकास कसरी पाउँछ त ?
अदालतले संविधानलाई बलियो बनाउँदै फैसला गरे पनि देश अन्योलमै रहने म देख्छु, किनभने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छैन । दिन्नँ भन्नुहुन्छ । संसद् फेस गर्छु भन्नुहुन्छ ।
फेरि संसद्मा नेकपा फूटले आधिकारिकता पाएको छैन । झमेला र अप्ठ्यायारा बढ्दै छन् । नेकपाको आधिकारिकता विना कुनै पक्षलाई पनि साथ नदिने भनेर कांग्रेसले हात टकटक्याइसकेको छ ।
नेकपाका आधिकारिकता नटुंगिदा झनै अन्यौल र अप्ठ्यारोेमा सर्वोच्चको फैसलापछि पनि रहिरहने देख्छु म त । नयाँ सरकार तत्काल बन्ने अवस्था चाहिँ मैले देख्दिनँ ।
ढिलोचाडो जेसुकै होस् निर्वाचनबाहेक अन्य विकल्पबाट अब देशले निकास पाउँदैन ।
नयाँ सरकार बन्यो भने सांसद किनबेच हुनसक्ने खतराका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन नि ?
सांसद किनबेचको अवस्थामा अहिल्यै नपुगौं, किनभने नयाँ सरकार बन्न त पहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्‍यो नि !
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्न भनेपछि कसरी तत्काल सरकार बन्छ त ? तत्काल संसद् भित्रबाट निकास निस्कने जस्तो अवस्था नै देखिँदैन ।
भनेपछि नेकपा एक ठाउँमा हुँदा निकास निस्कने भन्ने संकेत हो तपाईंको ?
हो । नेकपा फेरि एक ठाउँमा भए मुलुकमा समस्या आउँदैन । सरकार बनाउने झमेला पनि हुँदैन । नेकपाको दुवै पक्ष मिलेर अगाडि बढेमा देशमा अन्यौल नै हुँदैन । प्रतिपक्ष शून्यप्रायः छ ।
नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आए राप्रपाको साथ प्रचण्ड नेपाल, ओली वा कांग्रेस कसलाई रहन्छ ?
संसद र सरकारलाई प्रभाव पार्ने हाम्रो धेरै मत छैन । संसद्मा हाम्रो एक जना मात्र सांसद हुनुहुन्छ । अहिले नै हामी कुन पक्षलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगेका छैनौं । गर्नैपर्ने बेला आएछ भने विचार गरेर कुनै एकलाई सहयोग गर्छौं ।
राप्रपा अहिले कसरी अगाडि बढ्दैछ ?
हामी तीन पार्टी मिलेर एउटा पार्टी भएका छौं । अहिले पार्टीमा कुनै विवाद छैन । आउँदो वैशाखमा हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन हुँदैछ । सर्वसम्मत रूपमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने हाम्रो चाहना छ । त्यसो भएन भने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुन्छ ।
तपाईं पनि अध्यक्षको आकांक्षी हो भन्ने कुरा आइरहेको छ नि ?
अहिले यसै नभनौं । अहिले हामी पार्टी शुद्धीकरण, सदस्यता वितरण र पार्टी कमिटीहरू गठन गर्न सक्रिय छौं । देशभरबाट एउटा पिक्चर आएपछि त्यो भनौंला ।